Yaa Lammiikoo Sanqalleetti Salphanneera Tokkummaan Sagalee Haa Ta’anuuf!! IUOf!!!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaa Lammiikoo Sanqalleetti Salphanneera Tokkummaan Sagalee Haa Ta’anuuf!! IUOf!!!!
Yaa Lammiikoo Sanqalleetti Salphanneera Tokkummaan Sagalee Haa Ta’anuuf!! IUOf!!!!
Yaadan Moa’chuu gatii hin dandenyeefi OPDOn Yo diddan Qawes nani Qaba Jette Fakata!
“Hoomàa waraabessaa keessa Rabbi fira si hindhowwatin “jedha Oromoon yeroo mammaaku! Gochaa gara jabinaa guyyaa Har’aa mooraa Sanqallee keessatti namoota maqaa ABO deeggartu jedhuun godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa qabamanii mooraa Sanqallee keessatti hidhamanii jiran Irratti raawwate namnni quuqama Oromummaa qabu kan miseensa Poolisii Humna Addaa Oromiyaa ta’e “Garaakootu Nagubate” jechuun oolmaa Mooraa Sanqallee akka armaan gadiitti ibseera.
“Ani miseensa Humna Addaa Poolisii Oromiyaati guyyaa har’aa gochaan gara jabinaa mooraa Sanqallee keessatti hidhamtoota irraatti raawwate ijakootiin yeroon argu GARAA KOOTU NAGUBATE!” Innis ” Guyyaa Kaleessaa hidhamtoonni roorroofi gidiraa mooraa Sanqallee keessatti isaan irra gahaa jiru waan itti hammateef sagalee isaanii dhageessifatan Opdon immoo shira hammeenyaa xaxxee hidhamtoota irratti tarkaanfiin isaanii jiilchu Humna Addaatiin akka irratti fudhatamu murteessitee nuti baayyinni Keenya 500 ol kan taanu gara mooraa Sanqallee ganama har’aa sa’aatii 4:00tti seenne.
Hidhamtoota baayyinni isaanii 1000 ol ta’u kophee irraa baasuun sa’aatii 5:00- 8:00 tiitti Uleefi Muka Hartuutiin tumamaa turan, harkaa fi miilaa isaanii hedduutu caccabee, mataan haaddamaa keessa uleen rukutamuun hedduutu tarsa’e, Sa’aatii 8:00 yeroo ta’u miila qullaa laaqana malee hagabuu manatti akka ol galan ta’e , waan raajii inni cabes inni dhiiges yaala dhorkatameera, Dabalataan hidhamtoota 600 ta’an immoo Sa’aatii 5:00-10:00 reebamanii isayyuu kan baayyee GARAA KOO NA GUBE Arabsoodhaan Salphisuutu jalqabe keessumaa “isin Oromoo miti, waa’ee qabsoo hin beektani, isin warrri karaa lixaa Gumuz irraa dhalattani malee Oromoo miti, Gooftaan keessan Gumuz jechuudhaan waan haamilee isaanii cabsuun arrabsuufi salphisuutu ture , Warri Karaa Booranaafi Gujiis horii tisuu malee maal beekta jechuun salphisuutu ture.
Kun immoo Ciruma isaanii iyyuu Uummata Oromoo Saba guddaa salphisuudha, opdon ” Amala Bofaa qabdi kana jechuunkoo haaromsa jettee akkuma bofaa muuxattee summii ishee fudhattee ol jettee kunoo dhala Oromoo fixaa jirti kanaaf ani nageenya koof jecha maqaa koo ibsuu hin barbaanee maaloo adaraa lammummaa Oromoo adaraa waqaaf lafaa gochaa suukanneessaa kana ani Miseensa Poolisii Human Addaa Oromiyaati ta’een waanan IJA kootiin argeen kana Uumaata Oromoo dhaami qilleensa irra akka oolu taassisi Uummatni Sagalee haa ta’uufii” jedhe naaf ibseera maddi amanamaan quuqama qabu. Ayii Yaa Carraa Oromoo….?
2019 oromo music Addisu Karrayyuu Nuti Har’aas
Oduu Gamachisa ABO Kora Isaa Soodaretii Geeggefate||Dr Abiy Ahmed Cina akka dhabatani himi
Jarri kun Qabsoo Bilisummaa Oromootti gufuu ta’uu yoom dhaabu laata?
Hojiin isaanii gara deemanitti farrummaadha. Kan hirriba isaan dhorku rakkoo Oromoo miti. Kan hirriba isaan dhorku hinaaffaa ABO ti. Hojii masaanuuti hojjetu malee qabsoorraa dhimma hin qaban. Isaaniif milkaa’inni ABO laaffisuu fi balleessuu malee Oromoon gabrummaa keessatti hafes dhiises haajaa isaanii miti. Wayita haalli mijaa’aan argamu “ABO “ ofiin jedhanii Oromoo burjaajessu. Yeroo qabsoo hadhooftuu biyya Aurooppaa fi Ameerikaatti baqatanii jireenya qananii jiraatu. Fkn. Gaalaasaa Dilboo waggaa 15 darbeef bakka ABOn jiruyyuu hin beeku ture. Amma OPDO waliin harka walkeessa
naqatanii #ABO-QC fi #ABO_tokkoomee fi ADOn (gantoonni ) waliin hiriiranii uummata Oromoo burjaajessanii ABO balleessanii kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan gootonni kumaatamni itti wareegaman gatachiisanii karaatti hambisuuf badadaa jiru. Kun hunduu uummata Oromoo tuffachuu irraa kan ka’edha. Sababni isaas fakkeessanii uummatatti dhiyaachuun Uummanni hin beeku jedhanii yaaduurraa madda. Oromoon ABOn eenyu akka ta’e bareechee beeka waan ta’eef gantoonni kun abadan milkaa’uu hin danda’an.
“Haala Naannoo keenyaa yoo ilaalle, kan billlaa nuuf qarataa jiru hedduudha. Haala kana keessatti Wal loluu miti, wal dorgomuudhafuu yeroo hin qabnu. ”
Dubbii Obbo #Leencoo_Lataa , Kora Tokkoommaa ABO irratti dubbatan keessaa kan fudhatame
Dubbii Kana Barattoota Universitiidhaa Barachaa turani Boqonnaatiif Gara Maatiiti Galaa jiran Hundaa Biraan Naaf gaha.Ani Barataa Universitii Waggaa 2ffaa Boqonnaa Ji’a Gannaatiif Galee jiruudha.Utuun hin Aara hin galfatin Kunoo Guyyaa 9f Gaaffii tokko malee RIB qabamee hidhamee tumamaa ture reefuun Gadi dhiifama. Sababi Ani hidhamee Reebamaa tureef Mobayili fi PC koo keessa Suuraa WBO,Suuraa Goototaa,Alaabaa ABO fi Vedio Sirboota warraaqsaa waan argameef Reebamaa ture. utuun Ani waajjira poolisi jiruu Milishaa Sabboonnaan tokko achi keessaa na goorsee dubbii kana nati hime.. Karoorri Gara fuulduraati Agandaa komaandi poostiin qabatee jiru naaf himee jira.Innis
Ajandaa Guddaa ta’ee Hogganootni RIB fi Komaandi poostii Qabatani jiran keesaa tokko Barattoota University fi Kolleejjii irraa galaniidha.
Sababi isaa Barattoonni kun Ajandaa ABO qabatani gara Baadiyyaatti waan galaniif Uummata nurratti kakaasu jechuun Xiinxala cimaa keessa galchani jiru.Leenjiin akka Kennamuuf natti himee jira.Barattoota gaaffi kaasaan ni hidhu jedhan.kanaaf Gandaa isaan itti Galaniti maqaa isaani akka galmeesitani Waajjira Dargaggoo fi Waajjira Nageenyaaf akka Dabarsan Nati himee jira.
Kanaaf Tokkoffaa kan Galmeesssn
4.Gosa Barnoota baratanii
5.waggaa meeqa akka baratan
6.University irraa baratan akka galmaa’uu murtaa’eera.
Mobayili fi Compiteri isaani akka sakkata’amu kallattii kennameera.
Turtii isaan Maatii bira turan kanati maal akka hojjetan akka hordofamaan kallattiin kennameera.Koreen Bordi Nageenyaa Gandarra jiru isaan hordofa jedhan.Kanaaf Waan Barattoonni Sirriitti eegachuu qaban.
1.Yeroo WBO Quunnamtan bakka RIB jiru irraa fagaadha.
2.Silkii yeroo WBO bilbiltan birbir hin jedhinaa bakka jirtan dursa bitaa fi mirga suuta check godhaa ejjennoo qabaadhaati Dursa kallatti nama birati fakkeessa odeessa yoo dubbiin baramuuf kaatu haasaa jijjiiraa dhiisaa.
3.Yoo isini danda’ame namarraa fagaadha bilbilaa.Utuu nama waliin jirtani yoo isiniif dawalame sobaa akka nama silkii kaasuu “silent” godha.
4.Mana fincaanii teessani tasuma dhimma WBO fi sochii qabsoo tokko hin haasa’inaa manuma keessanitu oollaanu isin dhagahuu hin qabu.
5.Lakkoofsa Silkii miseensota WB Sammuuti qabadhaa malee qofoo irrati galmeessitani naannoo RIB hin taa’inaa.Tooftaa baafadha.
6.Yoo Cooddi muraasaan Lak silki WBO qofoo irrati galmeessitan ilee” Jaallee” jettani hin galmeeffatina.
7.Memory irrati suuraa WBO,Alaabaa ,Video baattani hin deemina copy godhaa memory keessani wajjin mana ka’adhaa deema.
8.Lakkoofsi addaa addaatiin jijjiraa dawalaa yoo danda’ame silkii icciti qabaadha.Silkii iccitii qabdan maati keessan beeksisa bor immo dhuftee maaliif dhoksitee silkii kana qabattee deemta jetti jarri.
9.Ergi Dawaltani xumurtani lakkoofsicha delete godhaa tarree maqaa namootaa dawwalamee fi keessaa balleessa.
10.Yeroo messagiin silkiin odeeffannoo ergitan ykn ergaan karaa message isiniif dhufu dafaa dubbisaa “delete “godha.. kana males message facebookiin namaaf ergitan ykn kan isiniif ergamu hunda balleessa.Kun miseensa WBOf ilee dirqama yoo akka tasaa wareegame fuutee ittii adda baafachuu malti.,
11.File fi Ragaa Kompitera irraa qabdan Fleshiti Copy godhaa dhokfadhaa Sirba Vedio Alaba ABO qabu baattani hin deeminaa,Suraa Alaaba Suura goototaa baattani hin deemina
12.Bakka deemtan hundaatti Waraqaa Eenyumma qabadhaati deema.
“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan godina Wallagga Bahaa
[SQ, Adooleessa 12,2019] Halkan edaa jechuun Adooleessa 11,2019 waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan Lixa Oromiyaa Godina Baha Wallaggaa caccabee buluu isaa gabaasni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaqqabe hubachiisee jira.
Waajjira ABO kan Magaalaa Naqamtee keessatti argamu kun buusii uummata magaalattiif naannoo ishee banamee hojii siyyaasa karaa nagaa gaggeessaa kan jiru yoo ta’u, waajjirichi kutaalee hedduu digdamaa ol ta’an kan qabu ta’uu isaa Barreessaan waajjirichaa nuuf gabaasanii jiru.
Haala caccabuu waajjira ABO Magaalaa Naqamtee kana baruuf bilbilaan barreessaa waajjirichaa gaafannee jirra. Akka Barreessaan waajjirichaa nuuf ibsanitti, halkan kaleessaa tilmaamaan naannoo sa’a sadii akka lakkoofsa Habashaatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa namoota naannoo waajjira sanaa jiran bakkichaa reebee ari’e jedhan.
Waajjira ABO tti ol seenuudhaan waraanni Mootummaa akka caccabse Kan ibsan Barreessaan waajjirichaa, naannoo sun kaamphii waraana mootummaa waan ta’eef waan godhan hundumaa utuu beekanii wal illee utuu hindhorkin itti yaadanii waajjira keenya caccabsan jedhu.
Waajjiricha keessaa maaltu akka miidhame gaafannee, Barreessaan kun yaada Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin balballi kutaalee waajjirichaa tilmaamaan digdamaa ol ta’e irraa caccabee jira, teessoon tilmaamaan lakkoofsi isaa dhibba sadii ta’uus caccabeera, waraqaa eenyummaa miseensota keenyaa reef baasaa jirrus saamameera, taampeellaan balbala dura jirus cicciramee jira jedhu.
Uummatni Oromoo magaalattii qabeenyaa isaanii qabeenya ABO haala kanaan caccabe gaafa argan miira gaddaan huwwifaman jedhaniis jiru. Keessa bahee namni imimmaan buusee bohellee jira jedhu Barreessaan waajjirichaa bilbilaan yaada nuu laataniin.
Akeeka karaa nagaa ayyamameeraa jechuudhaan mootummaan miidiyaa garaagaraan ibsa laataa jira, miseensa ABO fi qabeenya ABO xuqaa hinjirru karaa nagaatti amananii waan galaniif sochii dimokiraasii ayyamneefii jirra jedha mootummaan. Gama isaaniin garuu Barreessaan Waajjira ABO Baha Wallagga magaalaa Naqamtee, dubbiin kun waan dubbatamuuf waan hojjetamaa jiruun faallaadha jedhanii jiru.
“Nama sangaakee hate waliin sangaa barbaaddee hinargattu” jechuun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof yaada laataniin barreessaan Waajjirichaa, Waraanni mootummaa waajjira keenya akka caccabse nama naannicha tohatu waan qabnuuf dhibbaa dhibbatti beekna. Uummatni naannichaas gochaa mootummaan akka caccabe cimsee beeka, garuu isaan qabeenya kana lakkoofnee waan qisaasa’e kana shallaguuf gaafa waamnu isaanumtuu nu faana galmeessaa turanii ashaaraa kaafna nuun jechuun nutti qoosan jedhu Barreessaan kun yaada laataniin.
“Qabeenyichi qabeenya Oromooti, uummatatu buusii isaa buufatee waajjira kana banate, qabeenyi barbaadaa’e kan dhaaba ABO qofa utuu hintaane qabeenya Oromootis” jedhaniiru.
Gama fuulduratti abdiin karaa nagaa socho’uu isin qabdan jiraa? Jennee kan gaafanneefis deebii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin “egaa nuti karaa nagaatti amannee ifaan ifatti hojii siyyaasaa hojjetataa jirra. Leenjii garaagaraa karaa nagaa kaayyoof sagantaa keenya dargaggoota barsiifannee miseensa horataa jirra. Hojii nuti hojjennu hojii dhoksaa miti. Ganama waajjira seennee galgala baana. Mootummaan yoo nu sakattaa’uu barbaade waraqaa ayyamaa mana murtiitii dhiyeeffatee sa’atii barbaade manicha sakattaa’uu utuu danda’uu nu duuba dhokatee waajjira keenya caccabsuun isaa hedduu na gaddisiise” jedhu.
Galmeewwan maqaa miseensotaa qabaniif waraqaan eenyummeessaa miseensota reef leenji’anii bahanii saamamuullee gabaasa isaaniin ibsanii jiru.
“Mootummaan gaafa humnaan deemu uummatni abdii karaa nagaa socho’uu qabu citee qaama humnaan isa dararuu barbaadu kana baruuf sochii eegala. Akeekni kun ammoo dirree dimokiraasii bal’ata jedhamu dhiphisa jennee yaaddoo qabnas” jedhanii jiru.
Barreessaan Waajjira ABO Baha Wallagga kan magaalaa Naqamtee dhaamsa uummata isaanii bal’aaf akkasuma miseensota isaaniif dhaamaniin nuti hiraarsaa nurra gahaa jiruuf hinjilbeenfannu yaada jedhu kan qaban “hanga nama tokkotti gallutti qabsoo eegalle kana itti fufna. Haamileen nu hincabu. Kanaaf uummatni cimsee of ijaaree humna isa dararaa jiru kanatti iddoo gochuu qaba” jedhanii jiru.
Nama olaantummaa TPLF jalatti hidhamaa ture OPDOnis hidhaat jirti.
Nama TPLF ajjeesuuf barbaadaa turte OPDOn barbaaddee ajjeesaa jirti.
Waanuma doofonni wacanii jijjiirama ameebaa faarsantu namaag galuu dideem.
Sanqallee Amboo: Magaalaa Ambootti hidhamtoonni siyaasaa Oromummaa isaaniin qofa
ፕሮፌስር እዝቅኤል ገቢሳ በመቐለ ዩኒቨርሲቲ ያደረገው ንግግር Tigrai MediaHouse